Ganacsade caan ka ah Mareykanka oo sheegay in yahay musharax madaxweyne si uu Trump ula loollamo.
Tuesday November 26, 2019 - 11:06:02 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mid kamida ganacsatada ugu waaweyn dalka Mareykanka ayaa iskusoo taagay xilka madaxtinimada aqalka cad si uu ula loolamo Donald Trump oo ah siyaasi kasoo jeeda xisbiha jamhuuriga.
Nin lagu magacaabo Michael Bloomberg oo horay usoo noqday duqa magaalada New York intii udhaxaysay sanadihii 2002 illaa 2013 ayaa iclaamiyay in uu yahay musharax utaagan doorashooyinka madaxtinimada ee dhici doona dabayaaqada sanadda 2020-ka.
Michael Bloomberg ayaa xaflad ka dhacday magaalada Washington ka sheegay in uu doonayo sidii uu uga adkaan lahaa Trump oo uu ku sheegay siyaasi gabi dhaclaynaya oo dhiiqo siyaasadeed Mareykanka lugaha ugeliyay.
"waxaan geli doonaa doorashooyinka madaxtinimada si aan ujebiyo Donald Trump islamarkaana aan America dib ugusoo celiyo dhismaheedi hore, suurtagal ma ahan in aan usii dulqaadanno tasarufaatka gabi dhaclaynta akhlaaq darrada ku dhisan in madaxweyne Trump Afar sano oo kale " ayuu yiri Michael Bloomberg.
Ninkan lagu magacaabo Michael Bloomberg ayaa ah maal qabeen waxaana la sheegaa in uu yahay ninka 8aad ee ugu hantida badan dalka Mareykanka waana aas aasahay wakaaladda wararka Bloomberg oo badanaa ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Trump ayaa sanadda soo socota wajahi doona tartan doorasho oo aad ukulul xilli ay ku hor gudbanyihiin fadeexado buuro ah oo ay ugu waweynihiin xiriirkii qarsoodida ahaa ee uu la sameeyay madaxda dalka Yukreen iyo ku lug lahaashiyihii Ruushka ee doorashooyinkii hore.